Oman: Ny Fitandremana Ara-tsakafo, Ny Rakipeo Momba Ny Fampianarana Ambony · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Marie Flesch
Voadika ny 26 Marsa 2018 3:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, বাংলা, Italiano, Français, Nederlands, English
(Marihina fa tamin'ny 8 Janoary 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Niverina teo amin'ny sehatry ny bilaogy ireo bilaogera tany Oman ary nanomboka ny taona vaovao tamin'ny fanapahan-kevitra sy tetikasa goavana. Nanokatra bilaogy vaovao iray hizarana ny fandaharam-potoanany momba ny fitandremana ara-tsakafo amin'ny faratampony ilay bilaogera ATGM, izay ahitana ny fihinana sakafo kely efatra fotsiny isan'andro, sy ny fisotroana rano betsaka. Na izany aza, nahatsapa i ATGM fa tsy azo atao ho fomba fihinan-tsakafo maharitra izany fitandremana ara-tsakafo izany ary nanolo-kevitra safidin-tsakafo ara-pahasalamana hafa kokoa izy:
Ny momba ireo fihinanan-tsakafo mahazatra rehetra no zavatra fantatro sy tsapako avy amin'ny fampahafantarana rehetra hitako momba ny fitandremana ara-tsakafo sy ny fomba fisakafoana ara-pahasalamana. Tokony ho voalanjalanja ny lanjan'ny vatantsika, tokony ho salama tsara isika rehefa voalanjalanja ny ora fisakafoana mandritra ny tontolo andro, amin'ny alàlan'ny fihinana sakafo kely sy amin'ny fisotroana rano ampy, ary fahazarana misakafo ara-pahasalamana no tena zava-dehibe.
Azonao ny manadihady bebe kokoa momba ny fivoaran'ny fitandremana ara-tsakafony ao amin'ny bilaoginy.
Nisy ny zava-baovao tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Omani tamin'ny taona 2010 : ny rakipeo fanesoesoana iray antsoina hoe T-Junction izay miresaka momba ny vaovao farany navoaka tamin'ny gazety tao an-toerana, tamin'ny fomba somary mahatsikaiky. Nataon'i Mohammed Al Tamami sy Abdulla Ali ilay rakipeo. Indro misy fizarana iray tao amin'ny T-Junction:
Ao amin'ny lahatsoratra iray matotra kokoa, nanadihady ny tale jeneralin'ny Oniversitem-panjakana Michigan ao Dubai i Undercover Dragon, bilaogera ao amin'ny Muscat Confidential, mba hanontany ny heviny momba ny rafi-pampianarana ambony ao Oman. Nilaza ny antsafa fa ambany ny rafi-pampianarana noho ny fakan-tahaka sy noho ny rafitra fanombanana tsy araka ny tokony ary noho ny kolontsaina amin'ny famelana ny mpianatra rehetra amin'ny fahombiazana. Nisy tolo-kevitra momba ny fanatsarana ny rafitra tao anatin'ilay antsafa, anisan'izany ny fampidirana ny rafitra natokana ho an'ny mpianatra mahomby, ny famoahana ireo angondrakitra momba ny mpiasa sy ny saran'ny karama, mba hahafahan'ny oniversite manao fampitahana, ary mba hanerena azy ireo mba hifaninana… Azonao vakiana iray manontolo ny antsafa feno ao amin'ny Muscat Confidential .